Hargeysa (Gobanimo) – Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro), ayaa ka hadlay Xaaladda Dalku marayo, Ololaha Doorashada Madaxtooyada ee Saddexda Xisbi Qaran wadaan iyo Arrimo kale oo muhiim ah. ...
Isticmaalka baraha bulshada ayaa ka mid noqday nolol maalmeedka dad badan oo Soomaaliyeed, waxay noqdeen meelo la’isku dhaafsado aragtiyo, lagu doodo, islamarkaasna lagu xiriiro. Doodaha ugu badan malaha waxaa dhaliya ...
“Guuldarada waxa ka mid ah shan arrimood, oo hadii xishoodka qofka naftiisa laga waayo ka mid tahay..” Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir. “Qofku haduu ku rido xaaraan calooshiisa, waxay sabab ...
Halkan hoose ka daawo Muxaadiro ku saabsan Habeenka Laylatul Qadriga oo uu inoo soo jeedin doono Sh. Maxamed Cumar Dirir:
Duruusta laga qaadanaayo Hijradii Nabiga SCW iyo Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil, halkan hoose ka Daawo: Duruusta laga qaadanaayo Hijradii Nabiga SCW | Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil
Khudbadii Salaada Jimcaha ee Sh. Aadan Xaaji Maxmauud Xiiray iyo qodobada uu kaga hadlay: Halkan hoose ka Daawo:
Sababaha Keena Furniinka iyo Sh. Dirir
Halkan hoose ka Daawo Muxaadiro kooban oo ku saabsan sababaha keena Furniinka, waxaana soo jeedinaya Sh. Maxamed Cumar Dirir. Halkan ka Daawo:
Dersi Diini ah: Dhowrsonaanta Qofka Muslimka ah
Ku soo dhawaada oo ka bogta muuqaalkan kooban ee barnaamijka Midhaha Diintu idiinku talo galay. Wuxuuna ku saabsan yahay dhowrsonaanta qofka muslimka ah. Waxa soo jeedinaya sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil. ...
‘Ramadaantu waa fursad is beddel lagu samayn karo”Sh. Maxamed Idiris
Halkan hoose ka Daawo Dersi ku saabsan fursadaha looga faa’idaysto soonka Ramadaanta:
Duruusta Ramadaanta: Sunnayaasha Soonka Q. 2aad
Idilkiin Ramadaan kariim meel kasta oo aad joogtaan. Waxa aanu halkan idiinku soo gudninaynaa qaybtii 2aad ee Sunnayaasha Soonka oo dhawr qaybood oo taxane ah ka kooban. Waxaana ay qayb ...
Axkaamta Soonka iyo Sh. Carab…Casharkii 5aad
Halkan hoose kaga bogo Casharkii shanaad ee ku saabsan Axkaanta Soonka iyo Sh. Carab.
Axkaamta Soonka iyo Sh. Carab..Casharkii 4aad
Halkan hoose ka Daawo oo ka faa’idayso casharkii afraad ee duruusta Axkaamta Soonka, waxaana inoo soo jeedinaya Sh. Maxamed Macalin Carab. Daawo Wacan:
Axkaamta Soonka iyo Sh. Barbaraawi..Q3aad
Akhristeyaal waxaan halkan idiinku soo gudbinaynaa Cashar kale oo ku saabsan duruusta Axkaamta Soomka. waxaana casharkan inoo soo jeedinaya Sheikh Cabdilaahi Barbaraawi ee ka faa’idaysi wanaagsan:
Duruusta Ramadaanta: Sunnayaasha Soonka Q. 2aad.
Idilkiin Ramadaan kariim meel kasta oo aad joogtaan. Waxa aanu halkan idiinku soo gudninaynaa qaybtii 2aad ee muxaadiro ku saabsan Sunnayaasha Soonka oo dhawr qaybood oo taxane ah ka kooban. ...
Duruusta Ramadaanta: Sunnayaasha Soonka Q. 1aad.
Idilkiin Ramadaan kariim meel kasta oo aad joogtaan. Waxa aanu halkan idiinku soo gudninaynaa qaybtii 1aad ee Sunnayaasha Soonka oo dhawr qaybood oo taxane ah ka kooban. Waxaana ay qayb ...
Axkaamta Soonka. Casharkii 2aad
Daawadeyaal waxaan halkan idiinku soo gudbinaynaa Casharkii labaad ee Axkaamta Soonka ee ka faa’idaysi wanaagsan: